Waa suurtagal in la helo dhalashada Antigua iyo Barbuda iyada oo loo marayo barnaamijka muwaadinimada iyada oo la maalgelinayo dhismaha, ganacsiga ama sanduuqa horumarinta qaranka
jinsiyad labalaab ah;
ma jiraan wax shuruud u ah deganaanshaha tooska ah;
ma jiraan wax cashuur ah marka la eego dakhliga adduunka;
deganaansho - shan maalmood oo keliya, muddo shan sano ah;
wax shuruud u ah waxbarashada, khibradda maaraynta;
helitaanka fursad aad ku booqato in ka badan 150 dal, oo ay ku jiraan Hong Kong, Great Britain, iyo sidoo kale kuwa ku jira aagga Schengen;
rasiid gudahood muddo aan ka badnayn saddex bilood, oo ay ku jiraan carruurta yaryar, iyo sidoo kale carruurta da'doodu ka yar tahay 25;
diiwaangelinta muwaadinimada waalidiinta da'doodu ka yar tahay 65, oo la nool codsadaha tooska ah;
helitaanka dukumiintiyada rasmiga ah, muddo aan ka badnayn 60 maalmood laga bilaabo taariikhda maalgashiga;
dhul ku habboon deganaanshaha rasmiga ah.
Sida loo helo dhalashada Antigua iyo Barbuda:
US $ 100 - Codsade toos ah oo lagu daray 000 qof oo daryeel ah,
Qaddarka US $ 125 - codsade toos ah oo lagu daray 000 qof oo daryeelka ku jira.
2. Adoo maalgashi ku sameynaya hantida maguurtada ah ee dowladdu xaqiijisay:
Nidaamka barnaamijka ee la tixgelinayo gudahiisa, qiimaha dhismaha ma guurtada ah ee la helay waa inuu ahaadaa ugu yaraan 400 kun oo doolarka Mareykanka ah qorshooyinka horay loo ansixiyay. Hantida waa inay lahaataa ugu yaraan shan sano. Diiwaangelinta lahaanshaha hantida, kharashyada diiwaangelinta iyo bixinta canshuuraha waxaa la bixiyaa in ka badan kharashka ku baxa helitaanka dhismaha laftiisa.
3. Abaabulka ganacsiga
Codsaduhu waa inuu sameeyaa maalgelin ku saabsan US $ 1 milyan 500 kun si uu u bilaabo ganacsi una helo dhalashada Antigua iyo Barbuda. Sidoo kale, maalgashigu wuxuu noqon karaa mid wadajir ah. Xaaladdan oo kale, ugu yaraan musharrax kasta waa US $ 400, wadarta ugu yar waa US $ 5 milyan.
US $ 25 - ilaa 000 codsade;
US $ 15 - codsade kasta oo dambe.
US $ 7 - codsade toos ah;
US $ 4 - qof ku jira xanaanada inta u dhexeysa 500 iyo 18;
US $ 2 - qof ku jira daryeelka 000 ilaa 12 sano jir.